Global Voices teny Malagasy · 6 Jolay 2019
06 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 06 Jolay 2019
Ampahafantarina anao i Yazmín Novelo, mitantana ny @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 10 – 16 Jona
Mediam-bahoaka06 Jolay 2019
Ho an'ny 2019, nanasa maromaro mba hampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas izahay, mba hizara ny zavatra niainan-dry zareo ho fanomezana aina vao sy ho fampiroboroboana ny fitenindrazany. Ao anatin'ity lahatsoratra fanolorana ity, fantaro misimisy kokoa ny momba an'i Yazmín Novelo (@yaznovelo) sy izay vinavinany horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy...
Ampahafantarina anao i Charlie Uruchima, mitantana ny @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 24-30 Jona
Ho an'ny 2019, nanasa maromaro mba hampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas izahay, mba hizara ny zavatra niainan-dry zareo ho fanomezana aina vao sy ho fampiroboroboana ny fitenindrazany. Ao anatin'ity lahatsoratra fanolorana ity, fantaro misimisy kokoa ny momba an'i Charlie Uruchima (@kichwahatari) sy izay vinavinany horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.....
Ampahafantarina anao i Oralia Villegas García, mitantana ny @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 1 – 7 Jolay
Ho an'ny 2019, nanasa maromaro mba hampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas izahay, mba hizara ny zavatra niainan-dry zareo ho fanomezana aina vao sy ho fampiroboroboana ny fitenindrazany. Ao anatin'ity lahatsoratra fanolorana ity, fantaro misimisy kokoa ny momba an'i Oralia Villegas García (@licoraliavg) sy izay vinavinany horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano...
Taitra tamin'ny vaovao tamin'ny aterineto, nanontaniako ny namako raha misy afaka hanampiako azy ireo. Nasain'ny namako nifandray tamin'i Portnoy aho satria mety hahita asa ho ahy izy (mihomehy).
Janine Mendes-Franco: Tonga ny GV raha “nalalaka” ny onjam-peo Karibeana tamin'izany andro izany!
(Lahatsoratra tamin'ny volana Oktobra 2014) Ny fotoana voalohany indrindra nahenoako momba ny Global Voices dia tamin'ny alalan'ny bilaogy/rakipeo antsoina hoe Caribbean Free Radio izay i Georgia ilay namako – tale mpitantana ny GV amin'izao fotoana no nanomboka izany. Tamin'izany fotoana izany, David Sasaki izay fantantray rehetra tamin'ny anarana hoe “Oso” no...